Boeny: mponina tanora – mahay miara-miaina anaty fahasamihafana | Région Boeny
Teto Mahajanga no nosafidian’ny Fitondrana hanaovana ny lanonana fankalazana nasionaly ny Andro manerantany ho an’ny Mponina ny Alatsinainy 11 jolay 2016.
Teo anoloan’ny Lapan’ny Tanàna no nanantanterahana ny lanonana rehetra.
Tonga niahy sy nanome voninahitra ity andro ity taty Mahajanga ny Vadin’ny Filoham-pirenena, Rtoa Voahangy Rajaonarimampianina, notron’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta, notarihin’ny Ministry ny Mponina sy ny Fiahina ara-tsosialy Rtoa Realy Onitiana sy ny loholona vehivavy voafidy teto Mahajanga. Vory marobe ihany koa ireo tompon’andraikitra avy eto an-toerana notarihi’ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar sy ny Ben’ny Tanànan’i Mahajanga, Atoa Andriantomanga Mokhtar Salim.
Nialohan’’izay dia nisy ny filaharambe niainga teny amin’iny Jardin Cayla Mahabibo mandra-paha-tonga teny amin’ny Lapan’ny Tanàna. Nandray anjara tamin’izany avokoa ireo vehivavy tamin’ny sokajin-taonany avy teto Mahajanga, ka anisan’ireo ny Fikambanan’ny Mpiasa Vehivavy ato amin’ny Faritra Boeny.
Raiso andraikitra ireo Tanora, indrindra ireo Zatovovavy.
Io no loha-hevitra nampitondraina ity andro manerantany ho an’ny Mponina 2016 ity. Ady amin’ny tsy fananana asa ho an’ny tanora sy ny ady amin’ny herisetra ara-nofo, ara-batana ara-tsaina ary ady amin’ny fampanambadiana ny zatovovavy sy ny ady amin’ny vohoka aloha loatra no tena noventesin’ireo manampahefana rehetra nifandimby nandray fitenenenana.
Fisaorana manokana ho an-dRtoa Vadin’ny Filoham-pirenena no nataon’ny Lehiben’ny Faritra ny tamin’ny nanomezany ny Ivo-toerana fiofanana ho an’ny Vehivavy ao Mangarivotra ny volana mai 2015. Tsiahivina fa efa andiany roa no Tanora vavy nivoaka tao hatramin’izay.
Taorian’ny Kabary nifandimbiasana dia nanolotra fitaovana isan-karazany sy sakafo ho an’ireo beantitra vehivavy sy ireo fikambanam-behivavy marefo maromaro ny Vadin’ny Filoham-pirenena, toy ny fikambanan’ny mpanasa lamba, ny mpivarotra mosakiky…
Nanafana ny lanonana nandritra ny fotoana rehetra ny tarik’i Onja Tinondia sy ny mpandihiny.